घरमा क्रमशः शिल्प शिल्पहरू - Ikkaro
आफ्नै हातले चीजहरू गर्नु साँच्चै आनन्दको कुरा हो। केहि बाट केही सिर्जना गर्नुहोस्। हामी विश्वास गर्छौं कि सामग्रीहरू रिसायकल गर्न सक्षम हुनु बेकार हो र हामी तिनीहरूलाई दोस्रो जीवन दिन्छौं भनेर हेर्नुहोस्।
शिल्प बनाउनुहोस् र तिनीहरूलाई सुन्दर बनाउनुहोस्। त्यो अद्भुत छ।
शिल्पहरु, DIY, कसरी गर्ने, स्पष्ट अलग नगरीकन मिल्ने। हामीले भन्न सक्ने ब्लगमा लगभग कुनै शिल्प हो, तर यस सेक्सनमा हामी लेखहरू समावेश गर्दछौं जुन हामी केही गर्छौं
हेलोवीन कद्दू कसरी बनाउने
हिजो राती मैले हतारमा गरे मेरो पहिलो हेलोवीन कद्दू। यो कुनै पनि जटिल छैन यद्यपि मैले यो रातमा गर्नुपर्‍यो र मसँग राम्रो फोटो लिनको लागि आवश्यक बत्तीहरू छैन। तपाईंले हेर्न लाग्नुभएको प्यासी सधैं एक समान हुन्छ यद्यपि कहिलेकाँहि यो उज्ज्वल सुन्तला र अन्य समयमा यसको अधिक हरियो रंगको देखिन्छ।
यस वर्ष मैले एउटा कद्दू किन्यो, किनकि तिनीहरूले लेबलमा विविधता राखेका छन्: हेलोवीन, राम्रो छ, यसले हामीलाई धेरै जानकारी दिदैन, सामान्यतया मैले पढेकोबाट (कसैले यसलाई पुष्टि गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर हेर्न) तिनीहरूले प्रयोग गर्छन् (कुकुर्बिता पेपो, मिश्रित कुकुरबिता, कुकुरबिता मैक्सिमा, कुकुरबिता मच्छता) के हो अमेरिकी पम्पकिनहरू, जुन उनीहरूको लागि प्रयोग गर्छन् ज्याक ओ लालटेन, त्यो हेलोवीन कद्दू हो।
रंगीन पेन्सिलको साथ कसरी औंठी बनाउने
यो ती सानो प्रतिभा मध्ये एक हो तपाईं कहिलेकाँही वेबमा आफैलाई भेट्टाउनुहुन्छ र तिनीहरूले तपाइँको दिन बनाउँछन्।
हो, हामी कसरी बनाउने सिक्ने छौं काठको crayons को घरको अंगूठी, र यो यस्तो देखिन्छ कि, यस्तै सुन्दर
तपाईलाई वास्तवमै मनपर्‍यो। ठिक छ, यो कसरी गरिन्छ, यो धेरै सरल छ। यद्यपि ट्यूटोरियलको तस्बिरहरूमा उनीहरू लेथ प्रयोग गर्छन् हामी यसलाई अधिक घर बनाउने तरीकाले गर्न सक्दछौं, यद्यपि हामी मन्चुअल उपकरणको साथ पनि केही मल्टि फंक्शन उपकरणसँग बढी समय लगानी गर्दछौं।
तपाईंको मोबाइल चार्ज गर्न ईभा रबरको साथ कसरी एउटा आवरण बनाउने
धेरै पटक जब हामी मोबाइल चार्ज गर्दछौं हामी कहाँ जान्छौं थाहा छैन र हामी यसलाई भुइँमा आराम गर्छौं वा रेडिएटरको टुप्पोमा, टाढाको टेबुलमा जहाँ केबल झुण्डिएको अवस्थामा छ कि जो कोही जो त्यहाँ जान्छ उसले हामीलाई फ्याँक्नेछ।
म एक धेरै साधारण गर्न गइरहेको छु चार्जरमा स्मार्टफोनलाई समात्ने मामला र यी समस्याहरूको बारेमा बिर्सनुहोस्।
यो खाली बोतल कन्टेनरको साथ पनि गर्न सकिन्छ, सानो टोकरी बनाउने, तर नतीजा निकै कुरूप छ।
ट्युनाको क्यान रीसायकल
काल्पनिक र सरल शिल्प बच्चाहरु संग गर्न को लागी। यो बारेमा छ रीसायकल वा ट्यूनाको क्यानको पुनः प्रयोग गर्नुहोस् मैनबत्ती होल्डर वा फूलको भाँडा प्राप्त गर्न। हामी केहि सेकेन्डमा महान परिणामहरू प्राप्त गर्नेछौं।
त्यसोभए व्यापारमा तल ओर्लौं।
हामीलाई केही प्रयोग गरिएको क्यान र केही काठका कपडाहरू चाहिन्छ। काठका सामानहरूसँग यो धेरै रमणीय छ, तर रंगीन प्लास्टिकको चिम्टीको साथ हामी पनि धेरै राम्रा नतीजाहरू प्राप्त गर्नेछौं ;-)
कसरी घर क्रिसमस कार्डहरू बनाउने
क्रिसमस आउँदैछ !!! यो प्रोजेक्टहरू तयारी गर्न सुरू गर्ने समय हो जुन हामी केही हप्ताहरूमा प्रयोग गर्न चाहान्छौं। र एक ... पढ्न जारी राख्नुहोस्
एक महसुस श्री आलु कसरी बनाउने
एउटा साधारण शिल्प प्रयास गरौं जुन घरका साना बच्चाहरूको मनपर्ने खेलौना बन्नेछ। मलाई थाहा छ … पढ्न जारी राख्नुहोस्
कार्डबोर्ड अण्डा कपहरूमा पेन्ट गर्नुहोस्
बाट रद्दी टोकरी हामीलाई काम देखाउनुहोस् Kroon को एन्नो
उनले यो प्रवृत्तिलाई नाम पनि दिएका छन् Eggcubism
अहिले सम्म हामीले आर्टन अण्डाको कपहरू, ध्वनिरोधी कक्षहरू वा संगीत उपकरणहरूमा र खेलहरू खेल्न पुनः प्रयोग गरिसकेका छौं। मान्काला
दुई लाइटरको साथ मोटरसाइकल कसरी बनाउने
@irreductible मलाई यो ट्यूटोरियलको बारेमा ट्विटरको माध्यमबाट जान्न दिन्छ। सत्य यो हो कि मलाई लाग्छ कि यसलाई पुन: उत्पादन गर्न लायक छ र यो रहन्छ ... पढ्न जारी राख्नुहोस्
चुम्बकीय ब्याज कसरी बनाउने
तिमीलाई मन पर्र्यो बियर बोतल क्याप्स?
खैर तिनीहरूलाई गरौं चुम्बकीय। तेसैले? को लागी फ्रिजमा राख्नुहोस् र तिनीहरूलाई प्रदर्शन गर्न सक्षम हुनुहोस्, को लागि उदाहरण चेकर्स को लागी एक चुम्बकीय खेल बनाउनुहोस् र पक्कै पनि तपाईं केहि अधिक प्रयोगको बारेमा सोच्न सक्नुहुन्छ।
व्हाइटबोर्ड कसरी बनाउने
तपाइँ सबैलाई थाहा छ के सेतो बोर्ड.
यी बोर्डहरू जुन विशेष मार्करको साथ तपाईं लेख्न र तपाईंलाई चाहेको जति पटक मेटाउन सक्नुहुन्छ।